ခရစ္စမတ်နေ့မှ စတင်၍ နှစ်သစ်ကူး ကာလအထိ ချင်းပြည်နယ် အတွင်း ပြေးဆွဲနေသည့် ကားအသင်းအားလုံး ယာယ - Yangon Media Group
ခရစ္စမတ်နေ့မှ စတင်၍ နှစ်သစ်ကူး ကာလအထိ ချင်းပြည်နယ် အတွင်း ပြေးဆွဲနေသည့် ကားအသင်းအားလုံး ယာယ
ကလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့ကို အ ခြေပြု၍ ချင်းပြည်နယ်မြို့ကြီးများ ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်လိုင်းအားလုံးနှင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်စည်၊ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးကားအသင်းများအား လုံးခရစ္စမတ်နေ့မှစတင်၍ နှစ်သစ်ကူးကာလအထိ ယာယီရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကလေးမြို့ နှင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ရိဒ်သို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ပန်းချယ်ရီကားအသင်းမှ ဂိတ်တာဝန်ခံက ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
”ခရစ္စမတ်ရက်နဲ့နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ချင်းပြည်နယ် တောရော မြို့ပါဈေးဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ပြီး ဘုရားကျောင်းသွားကြတယ်။ ရက်ရှည်ဆိုင်တွေပိတ်၊ အလုပ်တွေပိတ်ထားတော့ လိုင်းကားတွေလည်း နားထားတယ်။ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ရိဒ်တစ်ဖက်ကမ်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ဘက်မှာလည်း ခရစ္စမတ်ရက်ကစပြီး အလုပ်တွေပိတ်ဆိုင်တွေပိတ်ထားကြတယ်။ အသွားအလာအရောင်းအဝယ်မရှိဘူး။ အားလုံးရပ်နေတယ်”ဟု ရိဒ် နယ်စပ်မှ ကုန်သည်ဦးတင်အောင်ကပြောကြားသည်။
ချင်းတောင်တံခါးဝဖြစ်သည့် ကလေးမြို့ကိုအခြေစိုက်၍ ဟားခါး၊ ထန်တလန်၊ ဖလမ်း၊ တီးတိန်၊ တွန်းဇံနှင့် ကျီခါးမြို့များသို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်လိုင်း ၁ဝ ခုဝန်း ကျင်ရှိပြီး ယင်းယာဉ်လိုင်းများအား လုံးခရစ္စမတ်နေ့မှစတင်၍ နှစ်သစ်ကူးကာလဖြစ်သည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိ အသွားအလာရပ်နားထားမည်ဖြစ်သည့်အ ပြင် ကလေးမြို့နှင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းသို့ ပြေးဆွဲသည့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်အသင်း ၁၅ သင်းမှာလည်း ခေတ္တရပ်နားထားမည် ဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ကြပြီး ခရစ္စမတ်ရက်နှင့်နှစ်သစ်ကူးကာလတွင် အရောင်းအဝယ်နှင့်အသွားအလာများ ရပ်နားထားခြင်းကြောင့် ယာဉ်လိုင်းများပါ ရပ်နားခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
မုံရွာမြို့ တက္ကသိုလ် လမ်းမကြီးကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း ၉ဝဝဝ သုံး၍ နိုင်?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ခံယူထားခြင်းခံရတဲ့ လင်းလင်း နဲ့ ထက်
ဖန်နီမုန်တိုင်း အိန္ဒိယ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ မေ ၃ ရက် မွန်းလွဲတွင် ဝင်နိုင်၊ လူပေါင်း ရှစ်သ??
ကျောင်းထုတ်ခံရသည့် ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ကျောင်းပြန်တက်ခွင့် ရရှိရေး စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိ??
နှစ်နှစ် သက်တမ်းရှိ အဖွဲ့ဝင် ငါးနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ရွေးချယ်
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ရောဂါပိုးရှိသူ ၃၂၉ ဦးရှိနေပြီး သေဆုံးသူ ၆၃ ဦးအထိရှိလာ သက်သာပျောက်ကင်းသူများလည်း ရာချီ၍ ဆေးရုံမှဆင်းသွား ဟုဆို